Microsoft Services For UNIX ( SFU ) - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Microsoft Services For UNIX ( SFU )
ကျနော် အနေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးရုံ သက်သက်ပါ။ window မှာ cmd ကနေ command တွေ အမျိုးမျိုးခေါက်နေကြပေမယ့် Linux မှာ လောက်တော့ command တွေက မသက်ဝင်ကြပါဘူး။ ခု ကျနော် တင်ဆက်ပေးမယ့် software လေး အကူအညီနဲ့ window မှာ ပဲ Linux command တွေ ခေါက်ပြီး သုံးလို့ ရနေပါပြီ။ သူဟာ virtual သဘောမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ Linux command အားလုံးနီးနီး ရပါတယ်။ window က ဖိုင်တွေကိုပဲ Linux command တွေနဲ့ သုံးသွားတာပါ။ ကျနော် တော့ အရမ်းကို သဘောကျလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တင်ပုံတင်နည်းကိုတော့ အောက်က Installation file ကို ကြည့်ကြပါဗျာ။ window မှာ command တွေ ခေါက်ချင်တဲ့ သူတွေ အတွက် Linux လဲ တင်စရာမလို virtual လဲ မလိုပဲ သုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသုံးကြည့်ကြပါလို့ virus အကြိမ်ကြိမ်စစ်ပြီးမှ တင်ပေးတာဖြစ်သလို ကျနော် လဲ စမ်းသုံးပြီးမှ တင်ပေးလိုက်တာပါ ကြော်ငြာတာ ကောင်းလား
5. guide for installation
Last edited by bonge; 02-01-2010 at 05:02 AM.. Reason: လင့်ထပ်ဖြည့်
အောက်ပါအသင်းဝင် 14 ဦးတို့မှ bonge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဖြိုးငြိမ်း, ဆန်းမောင်, ကျော်ထက်ချိန်, ဇော်ရဲပိုင်, နေသစ္စာ, အောင်ကျော်ဆန်း, aungbanthar, joe1111980, ko myo, phyomyintthein, sAnDViper, soemaung, viva, ^Dragon^
ပြန်စာ - Microsoft Services For UNIX ( SFU )
မင်္ဂလာပါ ကိုဘိုငယ် .... ကျွန်တော် နာပါတ် ၄.၅ကိုဆက်ဒေါင်းလို့မရတောူ့ဘး အကို .. တစ်ချက်လောက်ပြန်စစ်ပေးပါဥိးနော်.. ဒိတ်လွန်နေပြီလို့အော်နေတယ် ... အိုင်ဖိုင်က ... ဟိဟီးးးးးးးးးးးးး ..... စောင့်မျှော်နေသူပါ ..... စိတ်ကူးယဉ်နေသူပါ ..
ဟဲလို မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ ခင်ဗျာ ...
အော်နေတာလေးတွေ မူလပိုစ်မှာ ပြန်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါပီ မျှော်နေမှာဆိုးလို့ installation guide က Page 109 to 120 ထိပဲနော်။
အဆင်ပြေ အောင်မြင်ပါစေ ဗျာ ...
ဆန်းမောင်, ဇော်ရဲပိုင်, sAnDViper, viva
တစ်ခုခုတော့ လွဲနေသလိုပဲ ကျွန်တော် ဇစ်ဖြည်ကြည့်တော့ SFU35SEL_EN.exe ဆိုပြီး exe ဖိုင်တော့ ရတယ် .. ဒါပေမယ့် သူ့ကို ရန်းလိုမရဘူ .. ဇစ်ပဲဖြည်ဖြည်ခိုင်းနေတယ် . screenshot ကို ဒီမှာ မတင်တက်လို့မတင်ပေးတော့ဘူး ..အင်စတော့ guide ကိုကြည့်တော့ သူက SUSE ကနေ လာတာဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော် ကိုဘိုငယ် .. ကျွန်တော်သုံးကြည့်ချင်လို့ ကြည့်ပေးပါဥိးအကို ...
ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီ ရလာတဲ့ SFU35SEL_EN.exe ဖိုင်ကိုပဲ ထပ်ဖြည်ပေးဖို့ လိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဖြည်မယ့်နေရာမှာ folder တစ်ခု ဆောက်ပီး အဲဒီ folder ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ အဲလို ရွေးပြီးတာနဲ့ unzip ပေါ့ဗျာ
ပြီးရင် အဲဒီရလာတဲ့ ဖိုင်တွေထဲက SfuSetupဖိုင်ကို run ပါ။ ကျန်တဲ့ အဆင့်တွေကတော့ installation guide မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် အဆင်ပြေအောင် ပုံလေးတွေ ထည့်တာက အောက်မှာ ဖတ်လိုက်ပါခင်ဗျာ
image upload ဆိုဒ်
Last edited by bonge; 04-01-2010 at 06:50 PM.. Reason: လင့်ထပ်ဖြည့်
အော်ဟော သူက ဂလိူကိုးးး ... ဟိဟိ .. ကျွန်တော်က ဖိုဒါအသစ်မဆောက်ပေးလို့ထင်တယ် ..လောလောဆယ်တော့ မစမ်းနိုင်သေးဘူး အကို ..သူများကျောင်းေ၇ာက်နေလို့ .. ဟိဟိ .. သိတယ်ဟုတ် . ကျောင်းအားတဲ့ ရက်ကလေးတွေလေ ...
Web Services Explained - Solutions , Applications for Real kothu E-books မျာ3း07-09-2009 07:39 PM
OOP with Microsoft Visual Basic .NET and Microsoft Visual C# Step by Step phoelapyaee E-books များ225-11-2008 02:54 PM